Igwe kachasị dị ala karịa mgbe ọ bụla e dekọrọ n'ụwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa nke e detụworo n’ụwa
David melguizo | | Nkewa, Ngwaọrụ gbasara ihu igwe
Antarctica, kọntinent kacha oyi na mbara ala
Kwa afọ, mgbe udu mmiri na-abịa, enwere ndị na-atọ ụtọ oge oyi, snow, mana enwere ndị ọzọ na-ata ahụhụ ma na-eme mkpesa banyere obere okpomọkụ. Otu ihe ị ga-eme bụ ịkasi onwe gị obi site n'iche na e nwere ebe ndị ọzọ okpomọkụ na-adịkarị oyi.
Ebe kachasị oyi na-adịgide adịgide n'ụwa bụ Northeast Siberia, ebe ọnọdụ okpomọkụ n'obodo Verkhoyansk na Oimekon gbadara ruo 67,8 Celsius C n'okpuru efu na 1892 na 1933 n'otu n'otu. Ruo mgbe amụrụ ihe ikpeazụ, ihe ndekọ ahụ bụ 89,2 Celsius C n'okpuru efu, edebara aha na Russia nke sayensị Vostok na Antarctica nke a na 1983.
Ma, ugbu a, olee ebe kacha oyi n'ụwa? Ebe kachasị oyi na mbara ala dị na ugwu Antarctic n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Antarctic ebe okpomọkụ nwere ike iru ụkpụrụ dị n'okpuru 92ºC n'okpuru efu na abalị oyi.
Otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara ebe a site na nyochaa map zuru ụwa ọnụ kachasị dị na mbara igwe nke e nwetara ruo taa, mepụtara na data sitere na satellites dị omimi dị ka Landsat 8 (nke NASA na USGS).
Ndị nnyocha ahụ nyochara data ha nwetara site na satịlaịtị dị iche iche karịrị afọ 32. Ha choputara na otutu ihe edeputara edeko ihe banyere otutu oyi di n’usoro uzo di n’agbata ugwu Antarctic, ugwu abuo di na ebe ana akpo East Antarctic Plateau. Edere ndekọ ọhụrụ ahụ na August 10, 2010, na-eru ụkpụrụ nke 93,2 ºC n'okpuru efu.
A na-enyorịrị na ugwu ugwu Antarctic a nwere ike iru ọnọdụ okpomọkụ karịa ndị a Vostok n'ihi ịdị elu ya, mana ọ bụ n'ikpeazụ, ekele maka Landsat 8 sensor, na ọ ga-ekwe omume ịmụ mpaghara a n'ụzọ zuru ezu ma chọpụta ụkpụrụ ya.
Thezọ ịchọta azịza nye ajụjụ a bụ, kedu okpomọkụ kachasị oyi enwere ike iru n'ụwa na gịnị kpatara ya? Amalite mgbe ụfọdụ ndị na-eme nchọpụta nọ na-amụ nchụpụ nke nnukwu ugwu mmiri na-ada na mpaghara ọwụwa anyanwụ Antarctic. Mgbe ndị ọkà mmụta sayensị mụbara nkọwa, ha hụrụ mgbawa n'elu snow n'etiti dunes, ikekwe kee mgbe okpomọkụ gbadara ala nke na oyi akwa snow dara.
Mpaghara a enwerelarị oke okpomọkụ na-ada ọbụna karịa mgbe ihu igwe dị. Ọ bụrụ na elu igwe agbachapụ ruo ọtụtụ ụbọchị, ọnọdụ okpomọkụ nke ala na-agbadata, na-ekwe ka ọkụ fọdụrụnụ gbapụ. N'ụzọ dị otu a, etolite oyi na-atụ ikuku oyi na snow na akpụrụ mmiri, karịa karịa ikuku dị n'elu, na-agbadata mkpọda ugwu ugwu ugwu ọwụwa anyanwụ nke Antarctic ma banye na oghere ice, na n'ụzọ dị otu a okpomọkụ tụlee ọbụna karị.
Dị ka ndị na-eme nchọpụta si kwuo, ọ bụrụ na ikuku ahụ na-adịgide adịgide ruo ogologo oge, okpomọkụ fọdụrụnụ na-aga n'ihu, na n'ụzọ dị otú a, edepụtara ndekọ nke oyi na ụwa. Na mbu echere ya na okpomoku ndia gha achota na mpaghara ndi putara ihe, na egosi Scambos (onye isi oru ngo), mana achoputara ya na uzo ozo anahu ya na uzo di elu nke Antarctica.
Ozi ndi ozo: Mpaghara Siberia Altai dekọrọ okpomọkụ kachasị elu na afọ 170, Ihe akpụrụ akpụ ice kacha ochie n’ụwa achọpụtara na Antarctica, Ndị sayensị Sayensị na-akọ na ha erutela Ọdọ Mmiri Vostok kilomita 2 n'okpuru ice Antarctic
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa nke e detụworo n’ụwa
Ebe dị ezigbo oyi nke na ọ dị ka ọ gaghị ekwe mmadụ omume ibi na ya